တရုတ်နိုင်ငံ ယန်ကျိုးမြို့ရှိ ယန်ကျိုး နိုင်ငံတကာ ပြပွဲစင်တာရှိ တစ်ရက်လျှင် လူဦးရေ ၁.၅ သန်းကို COVID-19 nucleic acid စစ်ဆေးပေးနိုင်သည့် “သိမ်းငှက်” လေပူဖောင်း ရောဂါစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) - Xinhua News Agency
Yangzhou launches “Falcon” air-inflated testing lab for COVID-19 nucleic acid testing
Source: Xinhua| 2021-08-15 19:14:59|Editor: huaxia
1-10 – Photo taken on Aug. 14, 2021 shows “Falcon” air-inflated testing labs for COVID-19 nucleic acid testing at Yangzhou International Exhibition Center in Yangzhou, east China’s Jiangsu Province. The “Falcon” air-inflated testing lab, capable of automatic COVID-19 tests, can screen up to 1.5 million people every day using the ten-in-one mixed testing approach. (Xinhua/Li Bo)
မလေးရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လွှတ်တော်တွင် အများစုထောက်ခံမှု ဆုံးရှုံးပြီးနောက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်
လက်ဘနွန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ လောင်စာဆီသိုလှောင်ကန် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၂၈ ဦးသေဆုံး၊ ၇၉ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ